Urdolls को बारे मा बारम्बार सोधिने प्रश्न
Urdolls स्टोरका ग्राहकहरूबाट प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
Q: TPE र सिलिकॉन बीच के भिन्नता छ?
TPE पुत्रा को लाभ:
१. मूल्य सस्तो छ ($०० देखि $ २००० सम्म)
२, उच्च कोमलता, वास्तविक मानव छालाको अनुभवको नजिक, लचिलोपनले पूर्ण।
Ighter. हल्का वजन र सार्न सजिलो।
,, सुरक्षित र वातावरण मैत्री, मानव शरीर लाई कुनै हानी छैन।
बेफाइदा: उच्च तापक्रममा विरूपण, १०104 डिग्री फरेनहाइट (°० डिग्री सेल्सियस) माथिको तापमानको सामना गर्न सक्दैन।
सिलिकॉन गुड़ियाको फाइदा:
१, कुनै पनि गन्ध छैन, यो मानव शरीर को लागी सुरक्षित छ, तपाईलाई घनिष्ठ सम्पर्क गर्न दिनुहोस्, प्रेमको आश्वासन दिनुहोस्
२. सामग्री उच्च घनत्व छ, विकृत र क्षति गर्न सजिलो छैन, र टिकाऊ छ।
,, स्थिर सामग्री, ऑक्सीकरण र उमेर को लागी सजिलो छैन।
The. हात र खुट्टाको छालाको बनावट स्पष्ट देखिन्छ र विश्वास बढी हुन्छ।
नुकसान: उच्च लागत, थोरै महँगो (सामान्यतया $ २००० भन्दा माथि)
Q: तपाईको सेक्स पुत्रीको स्पर्शले कस्तो महसुस गरिरहेको छ?
A: हाम्रो सेक्सट पुतलीको छाला मानव छालाको नजिक छ। त्यहाँ हाल TPE (थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर्स) र सिलिकॉन बाट बनेको दुई लि sex्ग पुतली छन्। तिनीहरू धेरै नरम र लोचदार छन्।
Q: भित्र रहेको योनी र योनि घुसाउने बीच के भिन्नता छ?
A: परम्परागत योनी (भित्र निर्मित योनी) को मतलब योनी यो सीधा शरीरमा सम्मिलित छ। "सम्मिलित योनी" भनेको योनी शरीरमा ट्यूबलर रूपमा घुसाइएको हुन्छ।
परम्परागत योनी को विशेषताहरु (योनी भित्र निर्मित): योनी हटाउन योग्य छैन। वास्तविक व्यक्तिहरूको नजिक। यौन अनुभव अधिक वास्तविक छ।
सम्मिलित योनी को विशेषताहरु: योनी हटाउन योग्य छ। सफा र मर्मत गर्न सजिलो।